Nzvimbo Dzinonakidza Dzokushanyira PaRwendo Rwako Rwekutsvaga | Save A Train
musha > Travel Europe > Nzvimbo Dzinonakidza Dzokushanyira PaRwendo Rwako Rwekutsvaga
Kuronga rwendo rwega inogona kuva chipatapata kunyangwe kune mufambi ane ruzivo, kunyanya kana zvasvika pakusarudza nzvimbo kwayo yekushanyira uye zviitiko zvakanaka zvekutora chikamu uripo. Asi zvinonyanya kukosha, nekuti iwe unoda kuita zvakanakisa zvacho zvekuzvitsvaga-wega.
Kuva wega mumugwagwa kunokutendera kuti ushanyire chero kwaunoda chero nguva yaunoda, pasina kuita zvinoenderana nehurongwa hwemumwe munhu. wo, unogona kuzvipikisa zvakanyanya nekuve pakati pevasingazive zvachose, izvo zvinowedzera kuvimba kwako, uye chokwadi, kuzvikurira.
Izvo zvataurwa, une kwaunofunga mupfungwa zvako rwendo rwekuzvitsvaga? Ichi chinyorwa chinoratidza 7 yenzvimbo dzinonakidza kwazvo dzekushanyira wega.
1. Nzvimbo dzekushanyira Pane Rako Rwega-Rwekutsvaga Rwendo: Ositireriya
Australia ndiyo nzvimbo yekurota kune vazhinji vakasiyana nekuda kwayo mikana isingaperi yekudonha zvese kune amateur uye vane ruzivo rwakasiyana siyana. Uye kunyangwe iwe usina kugadzirira kudhiza, iwe uchave nenguva yakanaka yekutsvaga hupfumi hwakavanzika hwakawanda hunofanira kupihwa nenyika. Australia inogarawo kune yakatsakatika zvakanyanya kana mhuka dzengozi, saka iwe uchave nemukana usingawanzo wekupindirana nemamirioni-emakore ane zvisaririra padyo.
Asi hapana chimwe chezvinhu zvataurwa ndicho chikonzero chikurumwanakomana nei takaratidza Australia senzvimbo yepamusoro yekuenda kune vafambi vega. Zvikonzero zvakakosha irunyararo rusingaperi rwenyika, yakavimbika mabhazi, uye sarudzo dzekugara dzakachipa. Iwe unenge wakachengeteka kwazvo muAustralia.
Iyo tsika pano yakapfuma uye chikafu chinonaka, saka iwe unenge uine matani ezvekudya uye zvetsika-zvine hukama zvinhu zvekutarisa uye kudzidza kubva kune veko kana zvachose iwe unenge uine nguva yekurega. Pokugara nekutakura zvakachipa pano, tisingataure kuti inosvika sei Bangkok iri kubva kumativi ese epasi. Uye kana pfungwa dzako dzichishushikana kana kunetseka, unogona kugara uchipinda mutemberi kana nzvimbo yekufungisisa uye kufungisisa.
3. Nzvimbo dzekushanyira Pane Rako Rwega-Rwekutsvaga Rwendo: England
Makore akati wandei kumashure, London raive iro guta renyika rinonyanya kushanyirwa nevashanyi vega. Izvo chete zvinofanirwa kukuudza kuti ino inzvimbo yakachengeteka kuve kana iwe usina kambani. Buckingham Palace parizvino ndiko kukwezva kukuru kune vafambi vega, asi handiyo yega muLondon. Kana iwe uchida kuona zvinokwezva zvakanyanya mukati menguva shoma, ingojoinha London kufamba kwekusununguka paunoshanyira guta nguva inotevera.
Unonakidzwa nekutyaira wega kumatunhu marefu here? Vazhinji vafambi vega vanoda New Zealand kune iyo kutyaira sarudzo zvinovatenderana. Zvese zvaunoda kubvarura musasa kana mota yakajairwa uye woenda kunokwidzwa nemigwagwa. Uyu nyika yakanaka kuongorora. Vemunharaunda vanogamuchirawo kwazvo uye vanobatsira pese paunoda rubatsiro.
5. Nzvimbo dzekushanyira Pane Rako Rwega-Rwekutsvaga Rwendo: Peru
Dzinenge nzvimbo dzese nyowani dzekushanya kwako dzakakosha kune yakatarwa yezvikonzero, asi Peru ndiyo imwe yenyika dzinongomira. Nzvimbo ino yakashamisa vanhu vazhinji nerunako rwepanyama uye hupfumi, kuti vanhu havagone kungowana zvakakwana zvacho. Its akapfuma munhoroondo, makomo, uye tsika dzechivanhu, izvo zvinonakidza kune wese mushanyi. saka, kuona hupfumi hwayo hwenyika, tora rwendo rwePeru, uye kujairana nenyika.
IUS yakasiyanasiyana, saka hauzombonzwa kusiri munzvimbo kunyangwe kwaunobva. Nyika zvakare yakakura kwazvo uye ine zvese zvaunoda kuti uve makomo, mumapaki, mhuka dzemusango, kana mahombekombe. Kutaura nezvemabhishi, iwe unofanirwa kushanyira Florida nguva inotevera paunenge uri muUSA uye unoshambira mujecha jena. Uyezve, Disney inogona kunge iri nzvimbo yakanaka yerwendo rwako rwekukura sezvo zvichizokutora kuti udzokere shure pahudiki hwako, uye zvishoma zvinorwadza zvemberi hazvina kumbokuvadza chero munhu. Uye kana izvo zvaunoda imwe nguva yakanyarara wega, unogona kugara uri mu kubhadharira zororo kure nechaunga.
7. Nzvimbo dzekushanyira Pane Rako Rwega-Rwekutsvaga Rwendo: Japani
Japan iri mamaira pamberi pedzimwe nyika maererano nehunyanzvi. Kana iwe uri tech futurist kana investor, kuongorora mikana yebhizinesi rine guta rino kuchakufadza. Nyika zvakare musha kumatembere akanaka, mahotera epamusoro-soro, nemaresitorendi, pamwe neAsia yakavanzika kwazvo pfuma yepanyama. Chii chimwe, masisitimu anoshanda ekufambisa pano anoita kuti rwendo rwako rwega rufadze uye rusunetswe. Kana iwe uri mudiwa wemimhanzi, unogona kuunza laptop yako neako mimhanzi-inogadzira software kurega kurudziro ichikurova uye pamwe kuburitsa mimwe mitinhimira inofadza kuratidzira nzendo dzako dzega.
Munich kuSalzburg Ine Chitima
Vienna kuSalzburg Ine Chitima
Graz kuSalzburg Ine Chitima
Linz kuSalzburg Ine Chitima
Pane zvinhu zvakawanda zvekuita uye kudzidza muMalaysia, asi chokwadi chinonyanya kufadza pamusoro penyika iyi yekuSoutheast Asia ndechekuti huwandu hukuru hwevanhu vanotaura Chirungu. Izvi zvinoreva kuti hauzorasikirwe nenzira yako kana uchifamba wega pano. Nyika ine mahombekombe, makomo, kudhizaina mavara, uye zvese zvaungade kuzorora uye kunakidzwa nehupenyu wega.
Backpacking uye solo kufamba kuri kuve kwakakurumbira nezuva nekuda kwekuchinjika kwavanokanganisa. Muri kuita zvakanaka. Ingo rangarira kuva nebhajeti yakakwana yekugara kwako, chikafu, uye zvifambiso zvekutakura nekuti unofanirwa kuzvimiririra kana uchizonakidzwa nekuzvitsvaga-kwako kwekufamba.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga zvako Kunakidzwa Nzvimbo Kushanyira On Your Self-Discovery Trip nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "Kunakidzwa Nzvimbo Kuti Shanyira Pane Yako Yega-Kuwana Rwendo" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
kuwanikwa FunPlaces SelfDiscoveryTrip SoloTraveling